Parkinson na ịda mbà n'obi ọgwụ ọjọọ nwere ike ịgbanwe omume ikpe, ọmụmụ na-egosi - News Ọchịchị
Parkinson na ịda mbà n'obi ọgwụ ọjọọ nwere ike ịgbanwe omume ikpe, ọmụmụ na-egosi
Isiokwu a na-akpọ “Parkinson na ịda mbà n'obi ọgwụ ọjọọ nwere ike ịgbanwe omume ikpe, ọmụmụ na-egosi” e dere site Hannah Devlin Science mmekorita, n'ihi na theguardian.com on Thursday 2nd July 2015 18.26 UTC
Common ọgwụ ọjọọ n'ihi ịda mbà n'obi na Parkinson nwere ike achịkwa ndị mmadụ ihe ziri ezi banyere ndibiat ọzọ, Dị ka nnyocha ahụ na-akpali usoro ziri ezi ajụjụ banyere ojiji nke ọgwụ ọjọọ.
Nnyocha ahụ gosiri na mgbe ndị ahụ siri ike e nyere otu-apụ dose nke a serotonin-boosting ọgwụ n'ọtụtụ ebe na-emeso ịda mbà n'obi ha ghọrọ ndị ọzọ na-echebe ndị ọzọ, na-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ugboro abụọ ka ukwuu iji gbochie ha na-anata ihe electric ujo na a laabu nnwale. Ha na-ọzọ na-ala azụ-ekpughepụ onwe ha mgbu.
Related: Serotonin map nke ụbụrụ pụrụ iduga mma ezubere iche antidepressants
The ọkà mmụta sayensị ahụ chọpụtakwara na ndị dopamine-akwalite Parkinson ọgwụ, levodopa, mere ndị ahụ siri ike karị ịchọ ọdịmma onwe, ikpochapụ ndị nkịtị ọchịchọ na-ahọrọ na-enweta na-electric ujo onwe ha, mgbe ìgwè ewu na ndị nọ ha gburugburu.
Michael Crockett, a ọkà n'akparamàgwà mmadụ na Mahadum nke Oxford onye ndú nke ndị ọrụ, kwuru Inweta na otu ikpughe na ọgwụ ọjọọ nwere dị otú ahụ a kwesiri ngosi mmetụta na omume aka echiche na anyị nwere anụ nke ụkpụrụ omume.
"Ọrịa [-ewere ọgwụ a] esoro na okwu nke otú ha mgbaàmà mma, ma ọ bụchaghị na okwu nke otú ha omume mgbanwe,"Ka o kwuru. "Na ọgwụgwọ nke Parkinson, ụfọdụ ndị ọrịa na-aga on ịzụlite chaa chaa chaa na chaa omume mmekọahụ. Ọgwụ ọjọọ ya pụta na-eru n'ime ụwa n'ofè ndidi. "
O kwukwara na ọ bụ edoghị ma mmetụta hụrụ na ọmụmụ a ga-replicated na ọrịa. Otu ọzọ pụrụ ịpụta na ọgwụ ọjọọ nwere ike ime ka omume nke ọrịa "azụ ntọala" site kwụsie ike ha psychological ala.
"The Central ozi dị anyị mkpa ka ndị ọzọ nnyocha n'ime otú a ọgwụ ọjọọ na-emetụta omume, ma na ike ndị na ndị mmadụ na-ewere ha maka ọrịa,"Ka o kwuru.
Na-amụ, bipụtara na magazin Ugbu A bayoloji, 175 sonyere wee akụkụ, na 89 e kenyere na-enweta ndị na-emegide depressant citalopram ma ọ bụ a placebo na 86 nyere ma levodopa ma ọ bụ a placebo.
Ndị sonyere na-enweghị usoro họpụtara dị ka "deciders" ma ọ bụ "receivers" na anonymously paired elu. Ndị niile sonyere e nyere mildly na-egbu mgbu electric ịtụnanya adịkwa ka ha mgbu fọrọ nke mere na osisi ike bụ chasiri. Deciders a gwara ihe ịtụnanya na receivers ga-abụ na erite na ihe mgbu ya fọrọ.
Related: Ngwa ngwa oku na-aga n'ihi na ọhụrụ ọgwụ ọjọọ na-emeso akpata Parkinson
Deciders wee banye a ụlọ naanị ya na a na kọmputa ọnụ, na onye ọ bụla so na gburugburu 170 idomo. N'ihi na onye ọ bụla ikpe, ha ghaghị ịhọrọ dị iche iche ego maka dị iche iche na nọmba nke ihe ịtụnanya, ruo a kacha nke 20 ihe ịtụnanya na £ 20 kwa ikpe. Ọmụmaatụ, ha nwere ike na ha họrọ nke 7 ịtụnanya maka £ 10 ma ọ bụ 10 ịtụnanya maka £ 15. Ọkara nke mkpebi na ule ndị metụtara ihe ịtụnanya maka onwe ha na ọkara ka ihe ịtụnanya maka erite, ma n'agbanyeghị onye natara ihe ịtụnanya, na deciders ga-enweta ego.
on nkezi, ndị mmadụ nyere a placebo njikere iji kwụọ ụgwọ gburugburu 35p kwa ujo iji gbochie onwe ha mmerụ na 44p kwa ujo iji gbochie mmerụ ahụ ndị ọzọ. Ndị on citalopram, na seratonin dabeere na ọgwụ, nọ n'ebe dị ndị ọzọ nsogbu-egbughị oge n'ịza, njikere iji kwụọ ụgwọ ihe nkezi 60p kwa ujo iji gbochie onwe ha mmerụ na 73p kwa ujo iji gbochie mmerụ ahụ ndị ọzọ. n'ozuzu, ha naputa gburugburu 30 ole na ole ihe ịtụnanya onwe ha na 35 ole na ole ihe ịtụnanya ndị ọzọ karịa ndị on placebo.
Ndị mmadụ nyere levodopa, Otú ọ dị, abụghị njikere iji kwụọ ụgwọ ihe ọ bụla ọzọ iji gbochie ihe ịtụnanya ndị ọzọ karịa iji gbochie ihe ịtụnanya onwe ha. on nkezi, A kwadebere ha na-akwụ ụgwọ ihe dị 35p kwa ujo iji gbochie onwe ha mmerụ ma ọ bụ ndị ọzọ, nke pụtara nye on nkezi 10 ihe ịtụnanya ndị ọzọ n'oge nnwale karịa placebo otu.
"The dopamine ọgwụ mere ka ndị mmadụ ọzọ nke ịchọ ọdịmma onwe,"Kwuru Crockett. "Ọtụtụ ndị na-egosi ụkpụrụ a ebe ha chere na ọ bụ ka njọ na-emerụ ndị ọzọ ahụ karịa imerụ onwe ya. Na nke ahụ kagburu site ọgwụ. "
The eme nnyocha gosiri na n'ọtụtụ ga-eme n'ọdịnihu ọ pụrụ ikwe omume inye ndị a dị mfe ule na-amata ma ha mkpebi omume e n'ụzọ dị ukwuu ojiji site a ọgwụ, nakwa dị ka na-ajụ ha banyere ma ha na ọnọdụ na ihe mgbaàmà na mma.
"Anyị na-agaghị na-enwogha onye si onye ahụ dị mma n'ime a mpụ ma ọ bụ ihe yiri ya,,” Crockett said. “But in aggregate we make decisions multiple times a day and they can shape our lives.”
Apple setịpụrụ na-eme ka 63 nde iWatches na 2014 pric ...
Ga-amasị Gị Pee Na Your Socks Iji Chajịa ekwentị?
23510	0 Nkeji edemede, Depression, ọgwụ ọjọọ eme ihe, Hannah Devlin, Medical research, Neuroscience, News, Parkinsons Disease, Science, Society
← Amazon unu si n'ihe unu Paperwhite 2015 nyochaa: na sharpest na kasị mma ma 20 kasị mma ọhụrụ iPhone na iPad ngwa ọdịnala na egwuregwu a izu →